Kabaha hoose iyo sharabaadada, waa isbeddel aan moodin ka tanaasulin | Bezzia
Kabaha hoose iyo sharabaadyada, isbeddelka moodada ah ma quusto
Maria vazquez | | Isbeddellada
Marka ay timaado dhanka moodada, waxaan xusuustaa wax yar oo ka mid ah talada la ii dhiibay yaraantii. Oo malaha waa khalad in loogu yeedho waano, markii ay u ekaayeen casharrada. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii xasuus kasta ay tahay mid aan la isku darin kabo madow oo hooseeya iyo sharabaadyo cadcad.
Waa hagaag, waqti ka waqti moodada ayaa soo jeedinaysa isku-dhafkan isbeddel ahaan, oo i siinaya tilmaam ku saabsan sida fikraddu u duugowday. In kasta oo aysan ahayn isbeddel la isku raacsan yahay, haddana waxaa jira kuwa ku dhiirraday inay xidhaan jiilaalka oo sii wadi doona inay ku dhiiradaan, inkasta oo ay leeyihiin nuances yar.
Waa inaan qiraa inaan dareemayo taas fikradaydu waa duugowday ilaa hadda cadaadis intaa le’eg iguma cadaadin in aan dhadhanka beddelo. Wali ma jecli fikradda ah in la isku daro loafers iyo sharabaadada cad, inkastoo ay tahay inaan qirto inay jiraan dad yaqaan sida loo xidho oo loo iibiyo. iyo waxa ku jira dhar madow iyo caddaan ah, waxay noqon kartaa mid aad u adag.
Inkasta oo aan arkay isku-dhafkan oo lagu dhex daray dhar aad u kala duwan, fikradda muuqaalka madow iyo caddaanka ah ayaa ah midka kaliya ee i sasabi kara. Si cajiib leh, waxaan sharad ku geli lahaa kuwa muuqaalkoodu ka duwan yahay, taas oo ah, kuwa leh maro gaaban ama dhar. Shakhsi ahaan ma aqaano si aan u difaaco, laakiin waxaan hubaa in qaar badan oo idinka mid ah ay awoodaan.
Ku dheji isku dhafka kabaha hoose iyo sharabaadyada, waxaan doorbidayaa fikradda sharadka oo dhan on madow. Malaha, sababtoo ah waa khamaar caqli badan iyo, hey, waxay noo ogolaataa inaan cagahayaga diirimaadno wakhtigan sanadka. Isticmaal tandem-kan adigoo ku daraya surwaal madow, dharka cawlan ee tolan ama goonooyin daabacan oo madow leh.
Ma jeceshahay inaad halis gasho? Haddii xidhashada sharabaadada cad aysan ku qancin, waxaa jira soo jeedin kale oo laga yaabo inay sidaas sameeyaan. Waana taas sharabaadyo midab leh Waxay yihiin beddel kale oo lagu xidho moodadan. Maskaxda ku hay, in kastoo, haddii aad u tagto muuqaal dhexdhexaad ah oo aad gashato sharabaadyo midab leh, dhammaan indhaha ayaa ku jiri doona cagahaaga.
Ma jeceshahay isku-dhafkan ama miyaad sidoo kale leedahay mid aad u qoto dheer oo aan la isku darin kabaha hoose iyo sharabaadyada gaaban?
Sawirro - @abdihakin_abdi, @bartabacmode, @ abdisalamisma16, @dashakos, @xDayaannax, @nettiweber, @zuzanastraska
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Isbeddellada » Kabaha hoose iyo sharabaadyada, isbeddelka moodada ah ma quusto
Talooyin ku saabsan inaan timahaaga dhaqin maalin kasta